Asa uPVC Corrugated denga jira W1025 - China hubei Shengyu Building Materials
Shengyu uPVC Corrugated denga jira, chakagadzirwa uPVC, vaima kukupedzisira Asa nebwe. Rinoramba chezvipfuwo ruvara uye zvivako mumuviri pasi Ultra-Violet nemwaranzi, dampness, kupisa, chillness nezvainoita. Vakawanda kushandiswa workshop, yokuchengetera zvinhu, pekugara uye siyana zvechigarire matenga nemakore akawanda kushanda nhoroondo dzakawanda dzakabudirira. Shengyu uPVC denga pepa iri pfungwa itsva nemakadhibhokisi uye rusvingo cladding kuvakwa. Hazvina yakaoma, Zvinokosha zvakaisvonaka mune ruvara uye lightweight vachikitu, nani ...
FOB Price: 2.99-7.75 / mativi mamita
Shengyu uPVC Corrugated denga jira, chakagadzirwa uPVC, vaima kukupedzisira Asa nebwe. Rinoramba chezvipfuwo ruvara uye zvivako mumuviri pasi Ultra-Violet nemwaranzi, dampness, kupisa, chillness nezvainoita. Vakawanda kushandiswa workshop, yokuchengetera zvinhu, pekugara uye siyana zvechigarire matenga nemakore akawanda kushanda nhoroondo dzakawanda dzakabudirira.
Shengyu uPVC denga pepa iri pfungwa itsva nemakadhibhokisi uye rusvingo cladding kuvakwa. Hazvina yakaoma, Zvinokosha zvakaisvonaka mune ruvara uye lightweight, kupfuura simbi uye kwakakurudzira papepa. Zvinotokosha zvikuru, hauzombofi ngura mukati rinorema indasitiri Park.
ukobvu upamhi Cover Width Purlin Space urefu uremu pamusoro ruvara
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1025mm 940mm 800mm sezvo Required 3.0-6.0KG / ㎡ vaima White, Blue, Gray, Terracotta, Red
Akakurumbira ekunze nemishonga
Sezvo pamusoro rukoko zvinhu, Asa ouinjiniya nebwe riri zvemariro akakodzera Outdoor kushandiswa. Kunyange nevanhu Ultra-Violet nemwaranzi, dampness, kupisa, chillness nezvainoita, zvigadzirwa kuramba kutsiga ruvara uye mumuviri zvivako. Miedzo yaiitirwa Kuchembera Test Centre Arizona uye Florida zvinoratidza kuti idukusa △ E 5 mukati mumakore 10.
Shengyu epurasitiki denga jira rinopfuura 6,000h kuchembera bvunzo ne China National Test Center kuti Chemical Building Materials uye ayo mugumisiro △ E <4.
Shengyu uPVC chemarata denga jira, ayo kupisa conduction modulus iri 0,325 W / m. K, izvo anoenzanirana 1/3 pamwe kuti 10mm ukobvu nevhu machira, 1/5 pamwe kuti 10mm ukobvu simende machira, 1/2000 pamwe kuti 5mm ukobvu ruvara simbi machira.
Excellent Anti-ngura waivako
Shengyu uPVC chemarata denga jira, ayo pamusoro rukoko (Asa nebwe) ane waivako zvikuru Anti-ngura bvunzo, chisingafaniri kutsauka nokuda Kuparara mvura uye echando. Asa nebwe riri husingakwanisi nemakemikari akawanda zvakadai acid, alkaline, munyu, etc. Saka, zvakakodzera kuti panze kushanda munzvimbo costal munzvimbo ine zvakakomba munyu bvungapfunga ngura uye rinorema kusvibiswa mhepo.
The pose denga pepa riri gobvu uye reHaraki zvimwechetezvo sezvo lotus mashizha. Hazvina yekubata guruva uye hunogona kungoparara kucheneswa kuburikidza mvura.
Excellent Anti-mutoro waivako
Shengyu uPVC Corrugated denga pepa rine simba kukwanisa rinorema kubereka. The bvunzo, kwaitungamirirwa Shanghai Municipal Building Material chinoumba Quality Rinotungamirira uye Test Station, zvinoratidza kuti hapana mitswi nemamiriro 800mm zvokutsigira span uye 150kg kuiswa mutoro.
Mumwe mwero piece denga jira anoyera 1.87-6.0kg paavhareji mativi mita.
With China Chitupa Environmental Kunyora, chigadzirwa ichi chinoratidza hapana nemwaranzi, volatilizable zvinhu uye kusvibiswa. Chii zvakawanda, chinogona zvishandiswezve zvachose.
Previous: FRP daylighting papepa WW1025
Next: UPVC rusvingo Panel T1110
1.UPVC (Asa) rooing machira kushandiswawo denga pitches kubva 8 ° kusvika 22 °, pamwe purlin span anopfuura 800mm.
T980 denga jira kushandiswawo denga pitches kubva 6 ° kusvika 22 °, pamwe purlin span anopfuura 1200mm.
2.Thermal insulating zvinhu hazvigoni kushandiswa zvakananga pasi jira.
Tapota kushandisa manera kana zvimwe zvivako zvaida panguva installation.
Ndapota regai kumira pakati purlins maviri panguva installation.
Kwenguva gabled denga, machira kurutivi rumwe norumwe zvinofanira kuiswa panguva imwecheteyo pamwe muhomba Tile.
Installation hauna varumbidzwa kuitwa panguva tembiricha pazasi -5 ℃.
Gadza ne roofers nyanzvi inonzi unhu installation.
Horizontal bindepinde nomumwe wave wehunyambiri bindepinde hapana asingasviki 100mm.
The marata uye rusvingo cladding kunogona yakatarwa kusvitsa zvokukochekera kana screws kuzvipira tapping.
Nokuti jira ose, nemhando mbiri zvokukochekera zvinofanira ngadzirambe zvakanaka mumwe purlin, achipfuura chinozunguzirwa penyika.
Ose chinozunguzirwa penyika panguva kutwasuka pindana nzvimbo inofanira wakaiswa kuti purlin kubudikidza nezvikokovonho, uye unowedzera nzira inofanira kunwiwa munzvimbo nemhepo rinorema.
Nokuti rusvingo claddings, ivo overlaps pakati purlins maviri anofanira yakatarwa rivets maviri.
Rabha pamakusheni inofanira kushandiswa pasi jira kana kugadzira nokuda nezvikorekedzo, kuti sikuruwa nzungu zvinofanira akasungirirwa zvakanaka, kwete pamusoro-zvakasimba.
6.Roofing machira vanofanira kubviswa nokuda mukanwa saha.
Kushandisa zvemagetsi chibooreso kuti vanochera maburi.
Ndapota nechokwadi kuti machira akaiswa zvakarurama pamusoro purlins pamberi makomba kuchera.
Gomba dhayamita inofanira kuva 2mm kupfuura iya haka mandrel.
Ndapota shandisa PVC guruu kusimbisa kuti mis-akachera maburi.
8.Storage uye Kudzora
The machira zvinofanira kuchengetwerwa mundege wakatsiga, izvo zvinofanira kuva yakareba kupfuura jira.
Machira Shorter anofanira kupfeka yakareba machira kudzivisa deformation.
Regai vanounganidza Profiles akasiyana machira pamwe chete.
Ndapota kuchengeta machira mumumvuri.
Dzivisa ichipaza, vachidzipukuta kana scratching pemvura panguva kubata.
3 rukoko uPVC Ro pamusoro usina kukonekita
Rinoumba Asa Coated uPVC Roof Sheet
Corrugated Washington City Offices Roofing
Large Corrugated Magorovhosi Sheets
Multi germinales uPVC Roofing Tile
PVC Corrugated Roofing machira
Chakaita zvokugadzirwa Resin uPVC Plastic Roofing Sheet